I-Luxury Glamping Pod kufuphi neFort William
IGreat Glen Garden Pod yindawo entle ekhazimlayo entliziyweni yeThe Highlands of Scotland, kufutshane neBen Nevis kunye neFort William kwaye ifikeleleka lula kuzo zonke iindawo ezinomtsalane zeOutdoor Capital yase-UK. Isiseko esifanelekileyo sokuhlola indawo okanye ukumisa xa usiya/usuka kwisiqithi saseSkye. Ipod yethu yegadi epholileyo ilungele izibini.
I-en-suite Pod yethu etofotofo inobude obugcweleyo bebhedi ephindwe kabini kodwa incinci kancinci kunomgangatho ophindwe kabini (yonke ilinen yokulala inikezelwe). Indawo yekhitshi ixhotyiswe ngefriji, imicrowave, iketile kunye netoaster - izitya, izinto zokusika kunye neetawuli nazo zibonelelwe.
Iti, ikofu, ubisi kunye nokutya okuziinkozo kwesidlo sakusasa nako kubonelele iindwendwe kubusuku bazo bokuqala bokuhlala. (Izinto zethu zasekuseni ziqulethe i-gluten, asikwazi ukulungiselela iimfuno ezikhethekileyo zokutya!) Nceda uqaphele ukuba akukho mpheki kwi-pod!
Ilali yaseSpean Bridge inezinto ezininzi eziluncedo kwiindwendwe-ivenkile ekwindawo eluncedo yasekhaya/iPosi, iindawo zokutyela, iibhari kunye nekhefi yonke phakathi kwemizuzu embalwa yokuhamba.
Silusapho oluncinci olungacwangciswanga / olukhululekileyo oluya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba uzive usekhaya kwaye sikunikeze naluphi na ulwazi onokulufuna ukonwabela iholide yakho kwindawo. Siyabuxabisa ubumfihlo bakho kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza oko, nangona kunjalo sinosapho oluncinci ngoko ke nceda ulindele ingxolo evela kubantwana abadlala egadini!
Silusapho oluncinci olungacwangciswanga / olukhululekileyo oluya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba uzive usekhaya kwaye sikunikeze naluphi na ulwazi onokulufuna ukonwabela ihol…